သားသားမီးမီးရရန်​ (သို့) က​လေးအတွက်​ အ​ဖော်​ရ​အောင်​ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ယူရန်​ စဉ်းစား​နေပါသလား? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သားသားမီးမီးရရန်​ (သို့) က​လေးအတွက်​ အ​ဖော်​ရ​အောင်​ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ယူရန်​ စဉ်းစား​နေပါသလား?
ချစ်​တဲ့သူနှစ်​​ယောက်​​ပေါင်းဖက်​လို့ အိမ်​​ထောင်​မှုတစ်​ခုရယ်​လို့ ဖြစ်​လာတဲ့အခါမှာ ရှိ​နေတဲ့ အချစ်​​တွေကိုပိုတိုး​အောင်​ ကြိုးစားကြမှာ အမှန်​ပါပဲ… ဒီလိုအခါမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အိမ်​ထာင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ သားသားမီးမီး​ရတနာ​​​လေး​တွေကို ​မွေးဖွားမို့ ကြိုးစားကြပြန်​ပီ​ပေါ့…
အိမ်​​ထောင်​ပြုဖို့ရာအတွက်​ စဉ်းစားခဲ့ကြသလို သားသားမီးမီး​လေး​တွေကို ယူဖို့ရာမှာလည်း စဉ်းစားချင့်​ချိန်ကြမှာပါ… ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးယူရန်​ လိုအပ်​မယ့်​ အချက်​က​လေး​တွေကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​..
လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​လုံးမှာ က​လေးယူဖို့ရန်​အတွက်​ ​သေချာတဲ့ စိတ်​ရှိ​နေဖို့လိုအပ်​ပါတယ်​…မဟုတ်​ပါက မိမိအိမ်​​ထောင်​ဖက်​မှ ​တောင်းဆိုလို့သာ က​လေးယူလိုက်​ရ​ပေမယ့်​ ​စိတ်​အ​နှောက်​အယှက်​တစ်​ခုလိုဖြစ်​ကာ အိမ်​​ထောင်​​ရေးမသာမယာ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​..ဒ​ကြောင့်​ စိတ်​တူကိုယ်​တူဖြစ်​ဖို့ မဖြစ်​မ​နေလိုအပ်​ပါတယ်​…
မိမိပတ်​ဝန်းကျင်​မှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​များ၊မိခင်​များကို ​လေ့လာသင့်​ပါတယ်​…​ဆောင်​ရန်​ ​ရှောင်​ရန်​များကို သင်​ယူရပါမယ်​..
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အတွက်​လိုအပ်​တဲ့​အချက်​​တွေကို ဆရာဝန်​နဲ့ ​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​ရမယ်​..
မိမိမှာ အခြား​ရောဂါ(သို့)ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​ ဖြစ်​ပွားနိုင်​တဲ့ ​ရောဂါ အစရှိတာ​တွေအတွက်​ ကြိုတင်​ပြီး ကျန်းမာ​​​​ရေးစစ်​​ဆေးမှု-medical check up) လုပ်​သင့်​ပါတယ်​
ယခင်​က​လေး မယူရန်​ အသင့်​မဖြစ်​ခင်​က ကိုယ်​ဝန်​တား​ဆေး၊ပစ္စည်း အစရှိတာ​တွေကအသုံးပြုခဲ့လျှင်​ ယခု ရပ်​တန့်​ရပါမယ်​…
ကျန်​ရှိ​နေ​သော ​ဆေးအာနိသင်​မှ မိခင်​(သို့) က​လေးကို ထိခိုက်​နိုင်​တာမို့ .. ​ဆေး၊ပစ္စည်းများ ရပ်​တန့်​ပြီး ရာသီ​သွေးပုံမှန်​လာပြီးဆိုမှသာ ကိုယ်​ဝန်​ရရန်​ ကြိုးစားသင့်​ပါတယ်​
သင်​ဟာ ယခင်​က ​ဆေးလိပ်​၊အရက်​၊ကွမ်း အစရှိတာ​တွေသုံးစွဲပါက ယခုကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​တော့မယ့်​အချိန်​မှာ ရပ်​တန့် ​​သင့်​ပါတယ်…ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​ သုံးစွဲပါက ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျခြင်း၊က​လေး​စော​မွေးခြင်း၊က​လေး​ပေါင်​ချိန်​မပြည့်​ခြင်း​တွေ ဖြစ်​ပွားနိုင်​ပါတယ်​…
မိမိဟာ အစားနည်းသူ(သို့)အစား​ရှောင်​သူ ဖြစ်​ပါက ဒီချိန်​မှာ အာဟာရများတ​သော အစားအစာမှန်​သမျှကို စားသုံးသင့်​ပါတယ်​.မိမိဟာ ငါးကြိုက်​တဲ့သူဆိုပါက omega3ပါတဲ့ ငါးအမျိုးအစားကို ပိုမိုစားသုံးသင့်​ပါတယ်​..omega3သည်​ က​လေး၏ ဦး​ဏှောက်​နှင့်​မျက်​စိအားကို ပိုမို​ကောင်း​စေတာ​ကြောင့်​ပါ….
တချို့အစားအ​သောက်​များမှာ မိမိကြိုက်​တတ်​​သောငြား ကိုယ်​ဝန်ရရန် ​​အဟန့်​အတားဖြစ်​​သော(သို့) ထိခိုက်​​စေ​ပါက ယခုတည်းက ​ရှောင်​ကြဉ်​သင့်​ပါတယ်​
ထိုပြင်​ မိမိမှာ သင့်​တင့်​တဲ့ ကိုယ်​အ​လေးချိန်အချိုးအစား(BMI)ရှိ​အောင်​ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​..တချို့​သော အမျိုးသမီး​တွေမှာ ရှိသင့်​တဲ့ BMIမရှိပါက ကိုယ်​ဝန်​ရရန်​ ခက်​ခဲတတ်​ပါတယ်​…ဒါ​ကြောင့်​ ကျန်းမာသန်​စွမ်း​သောခန္ဓာကိုယ်​ဖြစ်​​အောင်​​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းများကို တ​နေ့ မိနစ်​ သုံးဆယ်​ခန့်​ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​..
မိမိပတ်​ဝန်းကျင်​တွင်​ ဓာတုပစ္စည်းများပြုလုပ်​ရာ​နေရာရှိပါက.. (သို့) မိမိမှာ ထိုကဲ့သို့​သော စက်​ရုံအလုပ်​ရုံမှာ လုပ်​ပါက.. သင့်​တင့်​​သော ​နေရာကို ​ပြောင်း​ရွှေ့လုပ်​ကိုင်​သင့်​ပါတယ်​.. ထိုပစ္စည်းများသည်​ ကိုယ်​ဝန်​​ရရန်​ခက်​ခဲတတ်​ပါတယ်​..ကိုယ်​ဝန်​ရပြီးပါက က​လေးကို ထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​..
ဒီလိုအချက်​​တွေအပြင်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ရန်၊မီးဖွားရန်​အတွက်​ လိုအပ်​​သော ​ငွေ​ကြေးကို ယခုတည်းက စု​ဆောင်းထားသင့်​ပါတယ်​..သို့မှသာ ကိုယ်​ဝန်​ပြခြင်း၊မိခင်နှင့်​သ​န္ဓေသားတို့၏ ကျန်းမာ​ရေး ပုံမှန်​ စစ်​​ဆေးခြင်း၊မီးဖွားပြီး မိခင်​နှင့်​က​လေး၏ ကျန်းမာ​ရေးကို ​သေချာ ဂရုစိုက်​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…
ထို့ပြင်​ ယခုထဲက မိမိတို့ ​မွေးဖွားလာမယ့်​ က​လေးအား မည်​သို့ ​စောင်​​ရှောက်​မည်​၊ပြုစုပျိုး​ထောင်​မည်​ အစရှိသည့်​ ရည်​ရွယ်​ချက်​များ ထားသင့်​ပါတယ်​..ဒါမှသာ ပြီးပြည့်​စုံတဲ့ အိမ်​​ထောင်​မှု တစ်​ခုကို တည်​​ဆောက်​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…
သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆုပြုလျက်​…